खैरेनीमा भलिबल प्रतियोगिता सुरु, अब हरेक स्थानीय तहमा खेलग्राम बन्ने : सांसद साउद – Himalitimes
२०७७ चैत्र १४ २०:०१ मा प्रकाशित
बौनिया, कैलाली । सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य नन्द बहादुर साउँद “राजेन्द्र“ले हरेक स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माणका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न लागि परेको बताएका छ्न।
शनिबार बर्दगोरिया ३ खैरेनीमा साईनिङ्ग स्टार युवा क्लबको आयोजनामा संचाललित चौथो राष्ट्रव्यापी खुल्ला भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै यस्तो बताएका हुन ।
कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकारले समेत खेलकुदको विकासका लागि स्थानीय तहमा एक खेलग्राम, भौतिक संरचना निर्माणको योजना ,दक्ष खेलाडी उत्पादनको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य बढाएको बताए ।
उनले बर्दगोरिया स्थित मुडा बजारको खेल मैदानलाई अझै व्यस्थित बनाउने योजना तयारी भैरहेको समेत बताए । यसैगरी उनले जिल्लामै क्षेत्रिय रंगशाला, फाप्ला क्रिकेट मैदान संगै खेलकुदका बिभिन्न आवश्यकताहरुलाई अगाडी बढाएको जनाए ।
कार्यक्रममा बर्दगोरिया गाउँपालिका अध्यक्ष बलिराम डगौरा थारुले यहाँको खेलकुद क्षेत्रको विकासलागि सग्दो प्रयास र सहयोग जारी राखेको बताए । खेलकुदको विकासबाट दक्ष खेलाडी उत्पादन मात्रै नभैइ सिङ्गो राष्ट्रको विकासमा टेवा पुर्याउन मद्दत पुग्ने हुदा यसको विकासका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बर्दयोरिया गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडाअध्यक्ष करने सुनार, बर्दगोरिया गाउँपालिका न्यायपालिका सदस्य टंक ओली, कार्यपालिका सदस्य कोकिला खत्री, भलिबल प्रशिक्षक बिष्णु भाट, खेलकुद बिकास समितिका क्षेत्रिय उप–निर्देश सुदेश सागर जोशी, करातेका प्रशिक्षक केशब बडुवाल, रानीजरुवा सामुदायि वनका अध्यक्ष लाल सिंह बि.क, लालीगुराँस सामुदायिक वनका अध्यक्ष भिम कँवर, सामाजसेवी तथा दानी मनऋषि आचार्य, न्यु ज्योति प्रा.बि प्रधानाध्यापक नवराज टमट्टा, न्य लालीगराँस बिद्युत सहकारी संस्थाका अध्यक्ष लोकेन्द्र न्यौपाने, के.के.वाई.सि युवा क्लबका अध्यक्ष शिखर बि.क लगाएतकाको सहभागिता रहेको थियो ।
राष्ट्रको शान खेलकुद बिकासको अभियान “भन्ने मुल नाराका साथ फागु पुर्णिमा होलि पर्बको अवसरमा भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो ।
युवालाई खेलकुदमा प्रोत्साहन र राष्ट्रलाई खेलकुद गतिबिधिकै माध्यमबाट चिनाउने उदेश्य सहित प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको क्लबका अध्यक्ष भेषराज जैसी बताए । उनले क्लबलाई यस क्षेत्रकै उत्कृष्ट बनाएर यो समाजमा रहेका बिभिन्न कुरिती कु–संस्कार र भ्रष्टाचारविरुद्धमा अगाडि बढ्ने बताए ।
प्रतियोगितामा देशभरका १६ वटा टिमको सहभागिता रहनेछ । प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले नगद रु. ८१ हजार पाउने छ भने द्धितिय हुनेले रु. ४५ हजार र तृतीयले रु. २१ हजार ट्रफि मेडल प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने छन । यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट बिधा तर्फ वेस्टस्पाईकर, वेस्ट सर्भर, वेस्ट ब्लकर, बेस्ट सटर, बेस्ट लिव्रो लाई नगद रु. २ हजार, बेस्ट प्लेयरलाई ३ हजार नगद, १ थान टि–सर्ट र अनुशासित टिमलाइ मायाको चिनो प्रदान गर्ने छन ।
शिकार खेल्न गएका एक व्यक्तिको भरुवा बन्दुकको गोली लागेर मृत्यु